KwiiNdawo zokutyela iiSandals Into oyifunayo luthando
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba kunye neehotele » KwiiNdawo zokutyela iiSandals Into oyifunayo luthando
Iindaba zaseAntigua kunye neBarbuda • Iindaba zeBahamas Breaking • Iindaba zeBarbados Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Caribbean • Iindaba zeGrenada Breaking • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeLuxury • iindaba • Resorts • Imitshato yothando • Iindaba eziNgcwele zikaSanta Lucia • Tourism • Iindlela zokuHamba | Iingcebiso Zohambo • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Julayi 15, 2021
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide kwiCaribbean zibonelela ngeyonaholide ibalaseleyo yokubandakanya izibini ezithandanayo.
Yonwabela eyona holide ibandakanya zonke iiholide zokutyela kwiiSandals Resorts kwiCaribbean kwaye ubone ukuba kutheni bebonelela ngeholide ezithandwayo kwizibini ezithandanayo ngokubandakanya okungaphezulu komgangatho kunayo nayiphi na enye iholide ethe tyaba elunxwemeni.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zibonisa ezona zinto zibandakanyayo kwihlabathi liphela.
Amaqabane angonwabela ulwandle oluhle-olunentlabathi emhlophe, indawo yokutyela eneenkwenkwezi ezi-5 kwiGlobal Gourmet ™, indawo yokuhlala entle, utywala obungenamkhawulo, imidlalo enomdla yamanzi, kunye nokunye.
Iimbadada ibiyinkampani yeHlabathi eKhokhelayo ebandakanya bonke abantu iminyaka engama-25 ilandelelana ukusuka kwiiMbasa zokuHamba zeHlabathi.
Khawufane ucinge ufika kwigumbi lokuphumla elikhethekileyo kwisikhululo seenqwelomoya, ukhutshelwe ngaphandle sisithuthi sokulinda, kwaye ungene kwindawo yokuphumla apho yonke into ibandakanyiwe. Yiba nomfanekiso wenkululeko yokuhamba kuyo nayiphi na ivenkile yokutyela kwaye wonwabele nantoni na oyithandayo, ukujoyina imisebenzi engadingi ukuba ukhuphe ikhadi lakho lebhanki okanye usayine ithebhu, kwaye akukho ukubala incam okanye isisa. Olo luyolo olunyulu lweholide ebandakanya konke. Kwaye kwiimbadada, konke okubandakanya kulawula phezulu.
Zonke iiSandals beach resort zihlala ngqo elunxwemeni olumangalisayo kwiindawo ezintandathu ezihle kakhulu kwiziqithi zeCaribbean, ingingqi eyaziwayo ngokuma okungapheliyo kwesanti emhlophe, amanzi amnandi aluhlaza kunye nokutshona kwelanga kwezothando. Ukusuka kwi-reggae ye-reggae efudumeleyo ye-reggae ukuya kwi-beat ye-Bahamas ephucukileyo kunye nobungangamsha be-volcano yase-Saint Lucia ukuya e-Antigua.
IiSuites ezikhethekileyo zeCaribbean
Iimbadada zinendawo yokuhlala ebutofotofo apho ziye zacinga ngayo yonke into ukwenza ukubuyela umva ngokufanelekileyo kwizibini ezithandanayo. Ukusuka kwiindawo ezimnandi ezingaphezulu kwamanzi kunye nee-suites ezinamawa ane-180-degree degree, ukuya kwigumbi eliphezulu le-Skypool Butler Suites ezinamachibi angaphantsi komda kunye neRondoval Suites ezizodwa, iiNdawo zokutyikitywa kweSandals ziyaqiniseka ukuphakamisa uthando kwiindawo eziphakamileyo.
Iziqithi ezizimeleyo ezingaselunxwemeni
Ngeembadada ze-Offshore Islands Islands iindwendwe zifumana iiholide ezi-2 ezibandakanya zonke iitropiki kwixabiso elinye. Ifumaneka e- Iimbadada Royal Caribbean kwaye Iimbadada iRoyal Bahamian imizuzu nje ukusuka kwindawo ephambili.
Ukuthabatha amachibi anomoya wezothando
Hlaziya inzolo epholileyo yeembadada ezibengezelayo. Bamba amaxesha okuzola okuzolileyo phakathi koxolo lwechibi elinelifom yasimahla, ukonwabele amandla esayini yethu yokubhukuda, okanye amava obuhle bamachibi ethu okungena zero ayintliziyo yeendawo zethu zokulala. Elinye lamachibi ethu anobuntu obahlukileyo kwaye uninzi lwazo ngamanyathelo aselwandle.
Imitshato kunye neHoneymoons kwiiNdawo zokuHlala eziNinzi zeHlabathi
Kwimbadada, amabali othando eendwendwe ahlukile kwaye akhethekile ... kwaye nemitshato yabo ikwanjalo. Kungenxa yoko le nto bethathe indawo yeephakheji zomtshato kunye nabacwangcisi bomtshato, besenza amava obuqu kakhulu. Zonke izinto ezingaphezulu kongezwe ukwenza usuku olukhethekileyo ngakumbi nangakumbi. Ke xelela iimbadada iphupha lakho, kwaye bazakulizisa ebomini.
Zonke iiSandals Zonke-ezibandakanya iPhakheji yokuHamba ibandakanya:
Abakhokeli babatyeleli baseUganda babuyisela umva ngaphandle kweengxaki ze-COVID-19
Ukugonywa kwe-COVID-19 ngoku kunyanzelekile kuyo yonke i-Air Canada ...
Phuma eMzantsi Lake Tahoe, oyintandokazi phakathi kweendwendwe
Ngaphantsi kobume boBomi bamaJuda
Ulingo lwezonyango lwepilisi yohlobo lokugonya lwe-COVID-19 ...
Ndwendwela iBritane ngoku kwaye ungajoyina i-ETOA CEO yeTom ...
Iirobhothi, iidrones, izithuthi ezizimeleyo ziya kumisa uKhenketho ...
IJetBlue yazisa ngeenqwelo-moya zaseNew York naseBoston ezisuka ...
Uninzi kunye nexabiso eliphantsi lokuya e-US
Ukuhamba ngaphaya kwesiXeko saseNew York, kwiKhowudi yeZip yaseManhattan
IJamaica iihotele kunye nomzi mveliso weeresityu ukhula ngama-330.7%
Ukuthengisa eLagardère kunye neLima Airport Partner ...
Umbono omtsha wezoKhenketho eHawaii kukuzibulala kwezoQoqosho, kodwa hayi ...
UMphathiswa waseSeychelles woKhenketho uTyelelo ...
AkukhoKhenketho, akukho COVID, kodwa simahla ekugqibeleni: IRiphabhlikhi ...
Inkosikazi yaseTanzania yokuHamba ngeNkwenkwezi yonwabile Phezulu